जेसस सान्चेज एडलाइड। प्रकाशका हतियारहरूको लेखकसँग अन्तर्वार्ता वर्तमान साहित्य
जेसस सान्चेज एडलाइड। प्रकाशको हतियारको लेखकसँग अन्तर्वार्ता
जेस सान्चेज अडालिदको फोटो: (c) एन्टोनियो आमोरेस। सौजन्य Ingenio डी Comunicaciones।
येशू सान्चेज अडालिद नयाँ उपन्यास छ, प्रकाशको हतियार। ऐतिहासिक उपन्यासहरूको Extremaduran लेखक छ यस्तो विस्तृत प्रक्षेप त्यो समय र उपलब्धिहरुमा लगभग हराएको छ: पूर्वको ज्योति, मोजारबिक, क्याप्टिभ, उदात्त ढोका, नाइट अफ अल्कान्टारा, अल्काजाबा... यो गर्न सक्षम भएकोमा खुसीको कुरा भयो यो अन्तर्वार्ता संग। यसमा उनले हामीलाई यो नयाँ कामको बारेमा बताउँछन् र आफ्ना मनपर्ने लेखकहरू वा प्रकाशन गर्ने दृश्यको बारेमा पनि थोरै बताउँछन्। म तपाईंको समय र दयालु व्यवहारको कदर गर्छु समर्पित
जेस सान्चेज एडलिड - साक्षात्कार
साहित्य वर्तमान: तपाईंको नयाँ उपन्यास हो प्रकाशको हतियार। तपाईं उनको बारेमा के बताउन सक्नुहुन्छ?
JESÁS SCHNZEZ ADALID: प्रकाशको हतियार एक छ आत्मा यात्रा इतिहास मा एक धेरै रोचक अवधि तिर, १० औं शताब्दीको अन्त्य र नवौं शताब्दीको सुरूवात। यो अज्ञात को रूप मा आकर्षक समय हो।
यो सबै सुरू हुन्छ, जब १००० सालको वरपर, अल्मान्जोर यसले हिबेरियन प्रायद्वीपको उत्तरमा बारम्बार धम्की दिन्छ। केहि तारसगोना तटमा रहस्यमय जहाजहरू आइपुग्छन् र तिनीहरू Cubelles को सानो पोर्ट मा उपस्थित एक अपरिचित छोड्छ। दुई केटाहरूको महत्त्वपूर्ण साहसिकले हामीलाई क्याटालोनियाको विभिन्न क्षेत्रहरूमा लैजान्छ, जब द्रुत गतिमा रहेको सैनिक अभियानहरू त्यो अन्त हुनेछ कोर्डोबा.
विचार बाट आएको हो एक प्रभावशाली ऐतिहासिक घटना संग भेट, तर अनजान अज्ञात। मैले लगभग संयोगले डाटा फेला पारे ... त्यहाँ कथाहरू छन् जुन वर्तमान क्षणको लागि प्रतिक्षा गरिएको जस्तो देखिन्छ।
यो सबै अघिल्लो उपन्यासको अनुसन्धान गर्ने क्रममा शुरू भयो, जब इस्लामिक इतिहासमा सूचनाको एकदमै महत्त्वपूर्ण अंश देखा पर्‍यो जुन मलाई पूर्ण रूपमा अनजान थियो: l११ औं शताब्दीको सुरुतिर क्यालिटानहरूले कर्डोबालाई बर्खास्त गरे, जब खलीफाट पूर्ण शक्तिमा थियो। यो Almanzor को मृत्यु पछि, र एक सुनियोजित बदला रूपमा भयो। किनभने अल्मान्जोर अघि, 985 XNUMX in मा, उनले बार्सिलोनालाई लुटे र नष्ट गरे, आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ती र हजारौं बन्दीहरूलाई कर्डोबामा लिएर।
क्याटालान गणनाले त्यो कुरा कहिल्यै बिर्सेन, न त उनीहरूले यो तथ्य बिर्सिए कि फ्रान्कहरू उनीहरूलाई सहयोग गर्न आएका थिएनन्। त्यसबेलादेखि उनीहरूले आफ्नो यात्रा सुरु गर्न फ्रान्किश राजतन्त्रबाट स्वतन्त्र हुने निर्णय गरे, यद्यपि मुस्लिमहरूले ठूलो खतरा देखाए। बदला लिने अवसर तब आयो जब खलीफाट गृहयुद्धमा संलग्न थिए। क्याटालानहरूले ठूलो फौज भेला गरे र कर्डोबा आए, जुन अझै पनि पश्चिमको सबैभन्दा धनी र सबैभन्दा उत्तम शहर थियो।
मैले खोजेको छु विश्वासीपूर्वक जीवन महल र योद्धा शिविरहरूमा पुन: निर्माण गर्नुहोस्, रईसहरू र पादरीहरू बीचको विशिष्ट सम्बन्ध, धनी मठको संस्कृति, दैनिक प्रथा, प्रेम, युद्ध, डर र साहस ... सधैं एकल सुन्दर र असहज भूमिको आकर्षक सेटिंग्समा, तर पनि उर्वरा र उज्यालो शहरहरूले भरिएको: बार्सिलोना , Gerona, Seo de Urgell, Vic, Solsona, Besalú, Berga, Manresa, Tortosa, Lérda…; र ठूलो मठहरूको जसले उनीहरूको प्रभावलाई विस्तार गर्दछ: सान्ता मारिया डे रिपोल, सान कुगाट, सान जुआन डे लास अबेडेसस, सान पेड्रो डी रोडस, सैन मार्टेन डे क्यानिग ... पृष्ठभूमिको रूपमा भव्य खलीफाट कोर्डोबाको साथ।
यी सबैको बिचमा, क जवान महिला को लागि छलफल हुनेछ तपाइँको बन्द परिचित संसार को दासत्व बाट मुक्त तोड्नुहोस् र सामाजिक।
अर्को महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व de प्रकाशको हतियार es ओलिबा, सेर्दान्य र बेसालीको गन्तीका छोरा, जसले वर्ष १००२ मा आफ्नो उत्तराधिकार त्याग्यो एक भिक्षु बन्नुहोस्। भ्रम र हिंसाको बीचमा, एक मानिस उदय हुन्छ जसको विवेक र बुद्धिले ज्योति ल्याउँदछ, र साँचो खजाना पत्ता लगाउँदछ, जुन प्रकृतिमा आध्यात्मिक छ ...
JSA: मलाई पढ्ने पहिलो पुस्तकको शीर्षक थियो म एक्स्ट्रेमादुराबाट हुँ। यो पुस्तक थियो बच्चाहरूको लागि कि Extremadura को कुरा बयान गर्दछ र विगत देखि Extremadura चरित्रहरु को कथाहरु भन्यो।
मैले पहिलो कथा लेखें जब म १० बर्षको थिएँ। एक थियो पियानोवादकको कथा.
JSA: म धेरै चकित भएँ मिगुएल स्ट्रोगोफ जुल्स भेर्न द्वारा। यसले मलाई उत्प्रेरित गर्यो, यसले मलाई तनावमा राख्यो, यसले मलाई यात्रा गर्यो ... म त्यो कथा कहिल्यै भुल्न सक्दिन।
JSA: यो मेरो मामला मा उत्तर दिन को लागी एक सजिलो प्रश्न छैन। तर मँ कोशिश गर्छु ... मिगुएल डेलीब्स, समकालीन स्पेनिश लेखकको रूपमा। चेप बारोजा, बेनिटो पेरेज गाल्डोस, लुइस ल्यान्डेरो... विदेशीहरू: भिक्टर ह्यूगो, फ्योडर Dostoevsky, सिंह टोलस्टय, एन्टोन चेखोभ, व्लादिमीर नाबोकोभ (म रूसी लेखकबाट हुँ ...)। थोमा पनि मानिस, भर्जिनिया ऊन, ओरहान कपास, नजीब मफौद, नजीब महफुद ... त्यहाँ धेरै छन्!
JSA: आधा आधा Italo Calvino द्वारा जब हामीसँग जानकारी छ।
JSA: म कालो मसी कलमको साथ लेख्छु सेतो फोलियोमा। त्यसो भए कम्प्युटरमा जान्छ ...
मैले एउटा झ्यालबाट पढें Alange मा मेरो घर बाट। एक धेरै सुन्दर परिदृश्य को अगाडि।
AL: र यो गर्न तपाईंको मनपर्ने स्थान र समय??
JSA: La बेलुका बेलुकी त्यो सन्झ्यालको छेउमा
JSA: म सामान्यतया ऐतिहासिक उपन्यासहरू पढ्दिन, किनकि म इतिहास, ग्रन्थहरू, इतिहास, निबन्ध पढ्न धेरै समय खर्च गर्दछु ... बाँकीको लागि, म सबै कुराको एक सानो पढ्छु: दर्शनयात्रा पुस्तकहरु क्लासिक्स, जीवनी र पनि कुकबुकहरु र ग्यास्ट्रोनोमी।
JSA: मैले एउटा किताब पढें युजेनियो जोली, शीर्षक बिहान हुनुभन्दा अघि। र म लेख्दै छु वृत्तचित्रको लागि लिपि ऐतिहासिक विषयको।
JSA: मलाई लाग्छ त्यहाँ धेरै अवसरहरू छन्। डिजिटल समर्थन सुरू गर्नको लागि राम्रो समय हो। कहिल्यै निराश नहुनुहोस्। राम्रो समाचार यो हो कि महामारीको बावजुद, प्रकाशन बजार बढेको छ र एक बर्ष भन्दा धेरै पढिएको छ।
के हामीले सामना गरिरहेको संकटको क्षण तपाईंको लागि गाह्रो भइरहेको छ वा के तपाईं सकारात्मक केहिको साथ रहन सक्षम हुनुहुनेछ?
JSA: यो एक डरलाग्दो समय हो। तर, मेरो मामलामा, म अधिक स्थिरता र एकाग्रता संग प्रतिबिम्बित गर्न र काम गर्न सक्षम भएको छु.
हामी बाँचिरहेको समयहरू वास्तवमै शोक, निराशाजनक छन् ... हामीले नयाँ र अप्रत्याशित परिस्थितिको सामना गरिरहेका छौं। हामी सबै, एक संस्कृतिमा हुर्केका छौं जसले बढ्दो दु: ख र मृत्युलाई हटाउन खोज्यो, हामी अचानक नाजुकता र असहायताको सामना गरिरहेका छौं। प्रश्नहरू सीधा र हिंसात्मक रूपमा हामीलाई आउँदै गरेको खतरा र डर मार्फत आउँछ जुन हामीलाई उत्तेजित गर्दछ। यो बिरामी हुने डर, एक गहन हेरचाह इकाईमा अपहरण हुने डर हो ... यो अन्तमा मर्ने डर हो। महामारीले हामीलाई मृत्युमा फर्कायो जुन धेरैको लागि सब भन्दा भय terrible्कर र अनियन्त्रित घटना हो।
म धेरै दर्दनाक परिस्थितिहरूमा आएको छु। तर पनि यो दुर्लभ समय, सबै प्रतिकूल परिस्थितिहरू जस्तै यसका शिक्षाहरू र सान्त्वना र प्रकाशको क्षणहरू छन्। यहाँ आवश्यक वर्णन संग केस भन्न पर्याप्त ठाउँ छैन। यो भन्न पर्याप्त छ म मानव बारेमा रोमाञ्चक चीजहरु खोज्दै छुत्यो अचम्मको कुरा हो हामी! छाया र बत्तीहरूको रहस्यमय मिश्रण ... त्यहाँ मानिसहरु छन् जो मकहाँ आउँछन्, जुन प्रायः आश्चर्यमा पर्छन्, आन्तरिक रूपमा पत्ता लगाएकोले, अव्यवस्थित रहे र अहिलेको सतहमा रहेका धेरै मानवीय गुणहरूसँगको भेटको लागि ... पुनः प्राप्त मित्रता, असन्तुष्ट परिवारहरू जुन फेरि भेट्छन्, अप्रत्याशित कलहरू, क्षमा, मेलमिलाप, वीर कार्यहरू, विच्छेद, ईमान्दार प्रेम ... म निश्चित छु कि अबदेखि केहि जस्तो छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » जेसस सान्चेज एडलाइड। प्रकाशको हतियारको लेखकसँग अन्तर्वार्ता
सिल्भिया ब्लान्चको अन्तिम गर्मी